चमत्कार भएमात्रै केपी ओलीको भारत भ्रमणअघि पार्टी एकता « Khasokhas Follow @khasokhasmag
चमत्कार भएमात्रै केपी ओलीको भारत भ्रमणअघि पार्टी एकता
‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समय आइसकेको छ । समय अत्यन्त छोटो छ, पार्टी एकता घोषणाअघि पार्टीभित्रै गर्नुपर्ने केही कामहरू अझै बाँकी छन् । यसले गर्दा भ्रमणअघि एकता घोषणा हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ’, माओवादीका एक शीर्ष नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘अब प्रधानमन्त्री फर्केपछि मात्रै घोषणा गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार अबको एकसातामा कुनै चमत्कार भएमात्रै ओलीको भारत भ्रमणअघि एकता हुनेछ नत्र कुनै पनि हिसावले सम्भावना छैन ।
३. बाँडफाँडको अनुपात के ?
१६ अध्याय र ७८ धारा विधान मस्यौदामा समेटिएका छन् । यो कार्यदलले एकीकृत पार्टीमा ३३ सदस्यीय स्थायी समिति, ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र करिब ८ सय सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद् सदस्य बन्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
एकीकृत पार्टीको संरचना दस तहमा बाँडिएका छन् ।
विधान मस्यौदा अनुसार दुवै पार्टीले एकीकृत पार्टी कमिटीमा क–कसलाई र कुन पद दिने भन्नेमा छलफल भएको छैन । यद्यपि पार्टी केन्द्रको अध्यक्षमा भने दुवै नेताले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने सहमति भएको छ । बाँकी जिल्लादेखि केन्द्रसम्म दुवै पार्टीले मिलाएर नाम तय गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ विधान अनुसार दुवै पार्टीले पहिलाका धेरै नामहरू कटाएर छरिता कमिटीहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि जिल्लादेखि नै सहमति जुटाउँदै एकीकृत पार्टीको कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कम्तीमा पनि १५ दिनको समय लाग्ने देखिन्छ ।